टिमिक्क परेका कपडा र जिन्सका टाइट पाइन्ट लगाउनुहुन्छ ? सावधान ! भुलेर पनि लगाउँनु हुन्न किन ? « Naya Bato
टिमिक्क परेका कपडा र जिन्सका टाइट पाइन्ट लगाउनुहुन्छ ? सावधान ! भुलेर पनि लगाउँनु हुन्न किन ?
नयाँबाटो, स्किनी जिन्स र हुडीस लगाउनु हुन्छ भने सावधान हुनुहोस् । किनभने स्किनी टाइट जिन्स लगाउँदा ब्याक पेन बढ्न सक्छ । ब्रिटिश काइरप्रैक्टिक एसोसिएशन (BCA) का अनुसार, फेशन छनौट तपाईको हेल्थमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
BCA का काइरप्रेक्टर टिम हचफुलको भनाई छ कि हेभी हुड्सले नेकमा स्ट्रेन् पर्छ । त्यहि स्किनी जिन्स मोमेन्ट्सको रिस्ट्रिक्ट गर्छ ।
BCA ले चेतावनी पनि दिएको छ कि हाई हील्स, ब्याकलेश शूज लगाउनाले पनि १०६२ मध्य ७३ प्रातिशतलाई ब्याक पेनको गुनासो थियो । २८ प्रतिशतलाई थाहा छ कि कपडाको कम्मर दुखाई, नेक पेन र पोस्चर सँग सिधा सम्बन्ध छ जबकि ३३ प्रतिशत यस कुराबाट अज्ञात छन्
टिम हचफुलको भनाई छ कि ‘मेरो अधिक रोगिहरुलाई थाहा नै छैन। उनीहरुको कपडा र एक्सेसरिजको ब्याक हेल्थ र पोस्चरमा असर पर्छ। साथै निकै कम मानिसहरु आँफ्नो दुखाईलाई ध्यानमा राखी आँफ्नो आउटफिट छान्ने गर्दछन् ।
केहि यस्ता विशेष कपडा छन् जसको हेल्थमा हिडन इफेक्ट पर्छ। ओभलोडेड र हेभी ह्यान्डब्याग हेल्थको लागि निकै नोक्सनदायक हुन्छ। ठिक यसरी नै स्किनी जिन्स, इससे हिप्स, नि की मोमेन्ट्स ठिक सँग हुन पाउदैन। हेभी ज्वेलरी, ओभरसाइज स्लिीव्स, हुड यस्ता लिस्टमा आउँछन। जून हेल्थको लागि ठिक होइन।
टिम हाचफुल भन्छन, कुनै पनि कपडा तपाईको मोमेन्टलाई रोक्छ वा तपाईको चल्ने, उभिने, वा बस्नलाई रोक्छ। यसले तपाईको हेल्थ र पोस्टरमा नकारात्मक असर पर्छ। यति मात्र नभई, यो नेक र ब्याक पेनको कारण पनि बन्न साक्छ। ज्वान्ट्स पेनको पनि यो मूख्य कारण हो।